Ekrem İmamoğlu’ndan Marmaray Hamlesi – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMarmaray ayaa ka dhaqaaqday Ekrem İmamoğlu
13 / 09 / 2019 34 Istanbul, Tareenka Tareenka, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
ekrem imamoglundan marmaray dhaqaaq
Duqa Magaalada Istanbul (IMM) Duqa magaalada Ekrem Imamoglu ayaa sheegay inay tahay codsi ka yimid reer Istanbul in wareejinta ay ansax tahay kala guurka Marmaray oo loo wareejinayo khadka metrooga sidoo kale laga soo wareejinayo Marmaray ilaa khadka metro.
Madaxweynaha Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) Madaxweynaha Ekrem Imamoglu, iyo sidoo kale kala guurka ka socda wadada tareenka ee Marmaray, iyo sidoo kale u guurista wadada tareenka ee Marmaray waa ansax, ayaa yiri codsi ka yimid shacabka Magaalada Istanbul.
Imamoglu, "Waan la wadaagi doonaa codsigan Wasaaradda Gaadiidka, dabcan," ayuu yidhi.
İmamoğlu wuxuu la wadaagay fiidiyoow sharaxaadiisa.
Fiidiyowga, macluumaadka ku saabsan khadka 'XETX' ee bilaashka ah ee 'IETT' ee loogu talagalay xariijinta metro waa la wadaagay.
Muwaadiniinta Fiidiyowga ah ee isticmaalaya khadadani waxay bixiyaan hal tigidh kahor ama ka dib tareenka, Video-ga ayaa sheegay.
Fiidiyowga ayaa hoosta ka xariiqay kuwa ku wareejinaya khadka lacag la'aanta ah ee Marmaray inay bixiyaan khidmad, muujinta muwaaddiniinta doonaya inay helaan hal tigidh tikit oo ansax ah Marmaray ayaa la isticmaalay.
Sida ay uga gudbayaan Marmaray oo loo wareejinayo xariiqda metrooga, wareejinta Metro-ga ee Marmaray waa ansax. Dabcan waxaan la wadaagi doonaa codsigan Wasaaradda Gaadiidka. pic.twitter.com/hxwqsxnumxvhc
- Ekrem İmamoğlu's Photos in @ekrem_imamoglu Instagram Account September 12, 2019
Asfaltu wuxuu u guuraa Yalova
U wareejinta Marmaray
Ka gudubka Marmaray ilaa khadka metroo